Midabaynta bogagga / midabaynta bogaga Dhar, Dhar iyo Naqshad
Midabaynta bogga fashion fashion qaabka fashion
Sii sawirka maskaxda
Bogagga midabaynta ee kala duwan waxay muujinayaan qaybo kala duwan sida bikini, jaakadaha, dharka habeenkii ama qalabka. Si kastaba ha ahaatee, naqshadeynta inteeda kale, si kastaba ha ahaatee, waa gebi ahaanba ilmaha. On dharka aad isticmaali kartaa biyo-qaboojiye, qalin midab leh, qalin rinji ama rinjiyeyaasha wax si ay u abuuraan naqshadaha aad qurux badan. Waxaa intaa dheer, carruurtu waxay helayaan fikrado ayadoo la raacayo hanuuninta waalidka, kuwaas oo midabyo isku mid ah ama midabka midabku yahay mid geesinimo leh ama mid caadi ah.
Ka eeg aruurintayada bilaashka ah ee bogagga midabaynta / midabaynta bogagga loogu talagalay Fashion, Model & Fashion:
Habka dharka habeenkii
Naqshadaynta dharka xagaaga
Tusaale ahaan bikinimada
Dhaqdhaqaaqa fashion bikini
Midabeynta bogga bikini
Rinjiyeynta bogga rinjiga
Naqshadeynta naqshadeynta moodada
Isboortiga Fashion Beach Volleyball
Kubadda cagta ciyaaraha
Quruxda Madadaalada Cagta Maraykanka
Midabaynta bogga bikinika
Tusaale ahaan boorsada gacanta
Tusaale ku jirta dharka
Bikini iyo strawberries
Midabaynta sawirka sawirka
Fadlan xiriirka Us, haddii aad raadineyso midab gaar ah oo leh ujeedo gaar ah. Waxaan sidoo kale awoodi karnaa in aan abuurno template color si aad u gaar ah ka soo sawir.
Miyuu runtii yahay mawqif dhab ah? Dhar iyo qaabeyn
Dharka moodada dharka
Midabaynta bogga dharka kubadda dharka
Midabaynta bogga bikinka
Midabaynta boodhka xeebta
Midabaynta sanduuqyada muraayadda bogga
Sameynta bogga jimicsiga
Fikrad loogu talagalay "midabaynta moodada fashion model"
Marietta wuxuu leeyahay,
6. Febraayo 2019 ee 12: saacadda 37
Waxaad u soo qaadan kartaa si aad u fiican, waxaan wax badan ka baran karaa bogaga midabaynta.